ပင်ပန်းနေတဲ့ စိတ်ကလေး ဘယ်လိုအနားပေးမလဲ - Page 18 of 30 - Hello Sayarwon
ပင်ပန်းနေတဲ့ စိတ်ကလေး ဘယ်လိုအနားပေးမလဲ
အတွေးများနဲ့ချာချာလည်နေရတဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုမျိုးက တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ငါအလုပ်မှာအဆင်ပြေပါ့မလား၊ အပြစ်များမြင်ခံရမလားဆိုတဲ့ စိတ္တဇ၊ လူတွေက ငါ့ကိုမခင်ကြတော့ဘူးလား ဆိုတဲ့ ဝမ်းနည်းစိတ်၊ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံပြတ်တော့မယ် ဘယ်ကရှာရပါ့ ဆိုတဲ့ ရတက်မအေးစိတ်၊ လုပ်စရာတွေကများနေပြီး လူကမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အခါ ဖိစီးတဲ့ စိတ် ….
ပြီးတော့ရှိသေးတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းခိုင်းလွန်းလို့ ဦးနှောက်က ဂျမ်းဖြစ်သွားတဲ့အခါ တစ်ချက်တစ်ချက် လွတ်သွားတတ်တဲ့ အသိစိတ်…ဟိုဟာမေ့၊ ဒီဟာမေ့နဲ့ စကားတွေမှားပြောလိုပြော၊ သိနေကျအရာတွေကိုလည်း သိပ်နားမလည်တော့သလိုလို၊ စကားသံတွေလည်း ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်၊ အလုပ်မှာလည်း အမှားတွေချည်းလုပ်မိနေတာ။ ဒါတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် ခေတ္တအနားယူခွင့်ကို ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်းလာတာကြာပြီ၊ ခိုင်းတာတွေလည်းများသွားခဲ့တဲ့အတွက် ဒီဦးနှောက်နဲ့စိတ်အခြေအနေကို ပြန်လည်ကုစားပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆို သိလိုက်ပါတော့။
အသက်ကတော့အမြဲရှူနေရတာပဲလို့ စောဒကမတက်ပါနဲ့ဦး။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါက အမှန်အကန်ကို ရှိုက်ပြီးရှူသွင်းရှူထုတ် လုပ်ရမှာနော်။ သေချာလေး စိတ်ထဲအာရုံပြုပြီး ရှူသွင်းရှူထုတ်မှန်မှန်လုပ်ရပါမယ်။ နဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားကြတယ်ဆိုတာထက် ဗိုက်ပေါ်လက်တင်ပြီး ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုအာရုံပြုပါ။ တစ်မိနစ်ကို ရှူသွင်းရှူထုတ်ခြောက်ကြိမ်ရှိပါစေ။
အိမ်မှာ အလှမွေးငါးကန်တွေရှိကြသူတွေအများကြီးပါ။ ကိုယ့်ငါးလေးတွေ ရေထဲမှာ ကူးလူးပျော်ရွှင်နေတာကြည့်ရင် စိတ်ထဲကြည်နူးကြတယ်မဟုတ်လား။ လေ့လာမှုတွေအရ အိမ်မှာငါးမွေးကန်ရှိတဲ့သူတွေဟာ စိတ်တည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ပေါ့ပါးမှုတွေပိုရှိပြီး စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရတာပိုနည်းတယ်လို့ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ငါးကန်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ရေသတ္တဝါများများရှိနေရင် ပိုပြီးစိတ်အပန်းပြေစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်မှာမရှိရင် ငါးပြတိုက်သာ သွားကြည့်ပါ။ ငှက်လေးတွေပျံသန်းနေတာမြင်ရင် လွတ်လပ်မှုကိုခံစားရသလိုမျိုး ငါးလေးတွေကူးခတ်နေတာမြင်ရရင် အာရုံဝင်စားမျောပါသွားတာနဲ့တင် ကိုယ့်ဖိစီးမှုတွေ ခဏမေ့သွားမှာပေါ့။ သွေးဖိအားကျမယ်၊ နှလုံးအတွက်လည်းကောင်းတယ်တဲ့။
အေရိုးဗစ်ကစားတာ၊ ခပ်မြန်မြန်လမ်းလျှောက်တာ ငါးမိနစ်လောက်လုပ်ရင်ပဲ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ အိပ်ပျော်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့ endorphin ဓာတ်တွေထွက်ရှိစေတာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
စိတ်အရမ်းညစ်လာရင် ခံစားချက်တွေကို သီချင်းနဲ့ပေါက်ကွဲကြတာ ထုံးစံပါ။ တကယ်လည်း ဦးနှောက်ထဲကလှုပ်ရှားမှုတွေကို အနည်ထိုင်စေပါတယ်။ သီချင်းနားထောင်တာ၊ သီချင်းဆိုတာတွေက ကိုယ့်စိတ်ထဲကနာကျင်မှုကို အာရုံပြောင်းစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အေးဆေးလေး သီချင်းကိုအာရုံစိုက်မျောပါလိုက်ရင်လည်း စိတ်ပါသွားတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်အတွေးထဲက အပူမီးတွေ လျော့ပါးသွားတာ သိသာလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကျိုးရှိအောင်၊ ပျော်ရွှင်သွားအောင် ကူညီပေးလိုက်နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲကပီတိစိတ်က ဦးနှောက်ကို အားဆေးတိုက်လိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီလိုပီတိစိတ်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့စေနိုင်ပြီး အထီးကျန်စိတ်ကို လျော့ပါးစေနိုင်တယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးလည်းကောင်းစေပြီး ကိုယ်ခံအားကိုတိုးစေပါတယ်။ အလှူအတန်းလုပ်လိုက်တာနဲ့အမျှ endorphin တွေပိုထွက်စေတာကြောင့် ကိုယ်ပြန်ရမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကလည်း မသေးဘူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
တွင်းအောင်းမနေဘဲ ဟိုဟိုဒီဒီသွားတာလည်းလုပ်ပါ။ ပိတ်ရက်မှာ အဖော်မရှိရင် တစ်ယောက်တည်း ဝင်းဒိုးရှော့ပင်းထွက်လည်း ရတာပဲလေ။ ဒီလိုသွားလာခြင်းကပဲ စိတ်ကြည်လင်တယ်၊ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်တယ်၊ လန်းဆန်းစေတယ်။ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေပဲ မြင်တွေ့နေရပြီး အလုပ်ခန်းထဲမှာပဲ ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်မထားသင့်ပါဘူး။ ပြောရရင် အလုပ်ရှင်ဆိုတာ ကိုယ်မရှိရင်တခြားလူခန့်လို့ရပေမယ့် ကိုယ့်မှာကျ ဒီဦးနှောက်လေးမှမစောင့်ရှောက်ရင် ရူးခါသွားမှာနော်။ လည်လည်ထွက်တာက နှလုံးခုန်သံမှန်စေတယ်၊ သွေးတိုးကျစေတယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့စေတယ်၊ ကြွက်သားအညောင်းအညာလည်း ပြေလျော့စေတယ်။
စိတ်သက်သာအောင် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ကုသမယ်။ ခြေထောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အရင်ရွေးချယ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် အကြောတွေတင်းထားပါ။ ပြီးမှ ၁၀ စက္ကန့်လောက်အချိန်ယူပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖြေလျှော့ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို တစ်ခုချင်းရွှေ့လုပ်သွားပါ။ အတော်များများကို အကြောတင်း၊လျှော့ လုပ်ပြီးတဲ့အခါ သိသာတဲ့ပေါ့ပါးမှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းက အိပ်ပျော်စားဝင်စေပြီး ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာတွေကိုပါ သက်သာလျော့ပါးစေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ယောဂကစားကွက်တွေက စိတ်ကိုအေးချမ်းစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပါတယ်။ နည်းနည်းပဲပုံမှန်လုပ်သွားရင်တောင် စိတ်ပူပန်မှုတွေသက်သာလျော့ပါးစေပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဟိုအလုပ် ဒီအလုပ်တွေ ခေါင်းထဲတန်းစီရှုပ်ထွေးနေပြီဆို အာရုံပြောင်းပြီး ခဏအနားပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ ထပြီးအညောင်းဆန့်တာ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ မုန့်ထစားတာ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ စကားသွားပြောတာ စသည်ဖြင့်။ ပြီးမှ ပြန်စဉ်းစားပါ။ ခေါင်းပိုကြည်ပြီး အလုပ်ပိုတွင်စေလိမ့်မယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ဦးနှောက်ကို တရစပ်မောင်းနှင်တာဟာ ဘုံးဘုံးလဲစေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သိပ်ကြီးပါတယ်။ ၂၄ နာရီမှာ မိနစ်ပိုင်းလောက်လေး အနားပေးတာ ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိပါဘူး။
အသက်ရှည်ချင်ရင်အပင်စိုက်ဖို့ ရှေးဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ ခြံကျယ်ကြီးနဲ့စိုက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခန်းဝ သို့မဟုတ် ဝရံတာက ပန်းအိုးထဲလည်း အပင်စိုက်လို့ရပါတယ်။ အပင်လေးတွေကို ဂရုစိုက်ပျိုးထောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးကို အပြည့်အဝရရှိနိုင်ပါတယ်။ အပင်စိုက်ဝါသနာပါသူတွေဟာ စိတ်ကျဝေဒနာခံစားရနိုင်ခြေနည်းပြီး ပူပန်သောကနည်းကာ လူအများနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။
Accessed Jan 9, 2018.
ရောဂါပေါင်းစုံကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သော အကြောင်းအရင်း (သို့) စိတ်ဖိစီးမှု